Talooyin si aad u daryeesho ilkahaaga oo aad ula dagaallanto caabuqa - Hagaajinta Caafimaadkaaga - TELES RESAY
ACCUEIL » Daawooyinka dabiiciga ah »Tilmaamaha daryeelka ilkahaaga iyo la dagaalanka caabuqyada - Hagaajinta caafimaadkaaga
Talooyin ku saabsan daryeelka ilkahaaga iyo la dagaalanka caabuqyada - Hagaajinta caafimaadkaaga
Infekshanka ilkaha wuxuu keeni karaa xanuun daran, barar iyo xitaa guud ahaan raaxo la'aan. Sidaa daraadeed, waxa ugu fiican waa in la doorto ka hortagga si looga hortago cudurrada. Laakiin sidee? Dhinaca kale, tagitaanka dhakhtarka ilkaha waa qaali. Dhinaca kale, xasuusnoow marka aan helno iyaga oo carruurnimada, Kuwaas oo loo yaqaano ilkaha joogtada ah ayaa ah kuwa aan helno inta ka hadhay nolosheena. Sidaa awgeed muhiimadda ay leedahay daawashada caafimaadkooda.
Si kastaba ha ahaatee, waxaan leenahay inaan iska ilaalino ilkahayaga illaa aan ka bilowno in uu xanuunku ku dhaco. Waan ku faraxsannahay arinkan, adigoon fiiro gaar aheyn cawaaqibta ay taasi keeni karto. Diyaar ma u tahay inaad daryeesho ilkahaaga si aad ula dagaalanto cudurada? Maqaalkani, waxaan ku soo bandhigi doonaa talooyin dhawr ah si aad u daryeesho ilkahaaga. Sababtoo ah haa, waxay ka dhigi doontaa ilko nadiif ah caado. Markaa kadib waxaad heli doontaa saameynta la rabay.
Soo hel maqaalkan: Sidee loola dagaallami karaa gingivitis leh daaweynta dabiiciga ah ee 5
Ku caday ilkahaaga si ay ula dagaalamaan infekshannada
Waxaa laga yaabaa in tani ugu horeysa ee ilkahaaga aad ka ilaaliso infekshinkaada waxay kugu hogaamin kartaa inaad tiraahdo, "Waad ku mahadsan tahay, laakiin waan ogahay. Qof kastaaba wuu ogyahay sida ilkaha loo cadaydo. Si kastaba ha noqotee, badi waqtiga, si fiican uma sameyn karno, ama inta badan kuma filna. Yaa, marka fiidkii yimaado iyo daalku, marna sariir ma tagin adigoon cadayan lahayn?
Ma fiicna in aad burushka ilkaha ku cadeyso adiga oo aan ka saarin cuntada ka hadhay. Waa inaan nadiifinno si aan u hubino nadiif ah dusha sare ee iliga iyo meelaha ku dhow. Markaa waxaan si fiican u nadiifin doonaa.
Marka lagu daro sidan oo kale, waa inaad ku iibsataa burush caday oo sida ugu fiican u ah afkaaga, waana inaad beddeshaa bil kasta 3.
Waxaad dooran kartaa a caday oo leh timo jilicsan oo jilicsan ama mid kale oo leh timo qaro weyn oo adag.
Runtii, cirridka ugu nugul waxay u baahan yihiin burush kuwaas oo timaha jilicsan. Haddii, dhinaca kale, waxaad dooran kartaa buraash oo leh cadaan adag oo culus, waxay u badan tahay in nadiifinta aan si wanaagsan loo samayn. Waxaad iska bixin doontaa isla marka aad dhaawaceyso naftaada.
Isticmaal siyaabo dheeraad ah ee nadiifinta ilkaha
Si aad ilkahaaga u ilaaliso caabuqyada, ha isticmaalin cadayga iyo cadayga. Waxaa jira waxyaabo dheellitiran oo nadiif ah oo nadiif ah oo lagaa rabo inaad ku darto jadwalkaada, xitaa haddii aadan isticmaalin mar kasta.
Laba ka mid ah waxyaabaha dheeraadka ah ayaa ah dharka ilkaha iyo ilkaha. Waxaa lagugula talinayaa inaad isticmaasho ugu yaraan hal mar maalintii. Habeenkii fiidkii, sababtoo ah waxaad u maleyneysaa inaad haysato waqti dheeraad ah oo aad ku qaadato nadiifinta ilkahaaga waqtigaas.
Bakhtiinta ayaa kaa caawin doonta inaad tirtirto waxkasta oo aadan ka tirtiri karin burush fudud. Cuntada ama wasakhda ka samaysa ilkaha dhexdooda waa shey aan buraashadu ku tirtirmin karti ku filan. Sidaa darteed, le ilkaha ilkaha waa muhiim in la nadiifiyo ilkaha gabi ahaanba.
Sidoo kale, Dareemaha ayaa ka caawiya yaraynta huurada iyo ilkeed. Waxay leedahay saameyn lid ku ah bakteeriyada, waxay siinaysaa neef cusub, oo loola dagaallamo infekshinka afka sida gingivitis. Sida aad u aragto, waa mid ku habboon cillad ku habboon.
Sidoo kale akhri: Calaamadaha: sababaha iyo daaweynta dabiiciga ah
Meeqa jeer maalintii ma tahay in aad ilkaha cadaydo si aad ula dagaalanto cudurada?
Muhiim ma aha inaad ilkahaaga si joogto ah u dhaqdo; ilkahaaga dhowr jeer maalintii iyo dhar dhaqidda iyo nadiifinta ilkaha ilkaha ayaa ku filan.
Sida ugu fiican, waxaan u baahanahay waxaanu ilkaha nadiifinaa 4 jeer maalintii. Marka aan kor u kacno iyo kadib mid kasta oo ka mid ah cuntada ugu muhiimsan ee maalinta. Kama nadiifin kartid ka dib subixii subaxii ama galabtii.
Si kastaba ha ahaatee, waa lagama maarmaan in la cadaydo ilkaha subaxdii, qadada kadib iyo casho kadib. Ka hor intaadan sariirta tagin, tani waa wakhti ku habboon in la isticmaalo qalabka jilicsan iyo in la sameeyo af gashi. Si kastaba ha ahaatee, waa inaad ka taxadartaa inaadan ilkaha cadaydhin ka dib markaad wax cuntid. Waa maxay sababta? Sababtoo ah waad dhaawici kartaa dhalada. Way fiican tahay inaad sugtid dhowr daqiiqo.
Adiga Imisa jeer maalintii maalintii miyaad dhaqdaa ilkahaaga? Waa maxay jadwalka aad raacdo? Waa run in daryeelkani waa inuu la qabsado qaab nololeedkaaga iyo baahiyahaaga. Si kastaba ha noqotee, daryeelka ilkahaaga ka dib talooyinkan ayaa kaa caawin doona kahortaga godadka baqdinta leh iyo in ilkahaagu caafimaad qabaan ilaa inta suuragal ah.
Daawooyinka dabiiciga ah si loola dagaallamo neefta xun
Soo ogow hababka ugu fiican ee dabiiciga ah ee kaa caawin kara inaad la dagaalanto neefta xun. Waa inaad haysataa farahaaga! Read more »
Maqaalkani wuxuu u muuqday midka hore https://amelioretasante.com/conseils-pour-prendre-soin-de-vos-dents-et-lutter-contre-les-infections/
Caadooyinka '5' si loo daaweeyo kaadida kaadida - Hagaajinta Caafimaadkaaga
Daawooyinka 3 ee Neuralgia - Hagaajinta Caafimaadkaaga